KLAX - Los Angeles Intl Airport Photoreal FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 41 477
Ity sary sarimiaina Real Real ity dia fanarenana tanteraka ny FSX/P3D Ny seranam-piaramanidina KLAX ampiasaina amin'ny endriny farany amin'ny ADE (v01.50), Google SkecthUp 8, & fitaovana enti-peo SBuilderX.
Toerana tsara tarehy io KLAX vaovao, Version 3.0 alalan'ny terminal vaovao ahitana trano izay efa resized sy redesigned mba hijery kokoa ny zava-misy. I nanampy alalan'ny terminal jiro, (tsy misy hazavana jiro mbola alina), hazo vaovao, fiara ny fijanonana garazy,
tany fiara taxiway fampiasana raikitra, ary ny maro hafa tsipiriany tsara mba hanatsarana ny KLAX traikefa.
Tsipiriany hafa tafiditra ny Vaovao Iraisam-pirenena Tom Bradley Terminal, trano miorina amin'ny W.Cenury Ave, 9 Airbus A380 toerana fijanonana, sy Photo Real tany textures. Ny runways sy ny seranam-piaramanidina aprons dia mifanaraka mba hifanaraka Google & Yahoo zanabolana sary.
Ny fananganana trano ary manambara ny tenany FSX/P3D. Ho any amin'ny seranam-piaramanidin'ny KLAX ianao dia mila miditra KLAX any an-tsaha "Airport code" avy amin'ny sidina mpitantana